Fitsinjarana mandritra ny fotoana Linux distros | Avy amin'ny Linux
phico | | GNU / Linux, soso-kevitra
Ry mpamaky malala!
Ny tena tanjon'ity lahatsoratra fohy ity dia ny hampahafantatra amin'ireo izay tsy mahalala azy na nahita azy io fotsiny tamin'ny fandalovana ary angamba ho fahalianana, sary iray izay mampiseho amintsika ny Fitsinjarana mandritra ny fotoana fitsinjaram-pahefana Linux. Ho toy ny fitsangatsanganana mahafinaritra izany - maninona? - amin'ny sari-tany izay heveriko fa tena mampahalala sy mahaliana.
Raha tsy misy fampidirana fanampiny dia andao hiresaka izany.
1 Ireo Distro telo voalohany araky ny Tondrozaran'ny fizarana GNU / Linux
2 Ny haben'ny fianakaviana tsirairay amin'ireo Distro telo voalohany
3 Mizarazara be i Linux. Izay distro no hofidiko?
Ireo Distro telo voalohany araky ny Tondrozaran'ny fizarana GNU / Linux
Mba hahafahan'izy ireo hiaraka amiko tsara amin'ity fitsidihana ity, ny zavatra voalohany tokony hataon'izy ireo dia ny misintona avy amin'ny tranokala «GNU / Linux fizarana fizarana»Ny sary maneho ny Fitsinjarana mandritra ny fotoana fitsinjaram-pahefana Linux. Amin'izany no hifandraisanay amin'ny a gửi ary tsy iray hampionona,
Fizarana fizarana Linux - Wikipedia
Ao amin'io tranonkala io no anoloran'izy ireo ny kinova 12.10 tamin'ny 2012-10-29, izay azo sintonina amin'ny endrika samihafa. Andao hisaotra ireo mpitantana ny tranokala izay mampahafantatra ny tenany ho A. Lundqvist y D. Rodic. Toy izany koa Fabio loli manome antsika sary nohavaozina mandraka ankehitriny izay azontsika jerena Wikipedia.
Manokatra ny sary izahay, izay tena lava sy tery, ary mifidy ny zomoma hatramin'ny 100% izahay hamaky ireo anarana mazava tsara. Amin'ny fomba ahitantsika ny ampahany amin'ilay hazo - lehibe loatra - fizarana Linux.
Mizotra ny sary tena mampianatra ary tsy miditra amin'ny resaka filozofika-tantara be resaka momba izay tonga voalohany, raha ny akoho na ny atody, dia ampahafantarinay ny tenantsika fa ny zokiny na ny lehibe indrindra VOALOHANY Distros izy ireo Debian, Slackware y Red Hat, araka ny filaharana avy eo ambony ka hatrany ambany, na avy amin'ny ankavia miankavanana raha miodina 90 degre ankavia izahay.
Mazava ho azy fa hihaona isika distros de Izy ireo dia TSY avy amin'ny iray amin'ireo telo voalohany ary velona izy ireo farafaharatsiny hatramin'ny faran'ny 2012, rehefa navoaka ny sary. Anisan'izy ireo no horesahintsika webOS, Openwall, OpenWRT, Devil, SmothWall GPL, Puppy, Black Jug, Linux Console, Sorcerer, GoboLinnux, RIP, NixOS, SliTaz, Enoch (i Gentoo dia avy aminy), Alpine, Rock, Linux Avy amin'ny Scratch, 0 (eny, misy na nisy distro miaraka amin'io anarana io), Ark, uClinux, Coyote, BrazilFW, Zeroshell, ELinOS, KaelOS, Penaut, CRUX, Arch, Specifix, Openfiler, snsetera, snsetera, snsetera ho an'ireo nesoriko na nanjavonako teo anelanelan'ny 2012 sy 2016, ho an'ireo vaovao teraka tamin'ny vanim-potoana iray, na ho an'ireo izay ho avy.
Tianay hasongadina fa ny lahimatoan'i Slackware fue SOISA, izay nitondra azy ho tanora tokoa. Red Hat nanan-janaka tany am-boalohany koa tao WGS Linux Pro, fa ny ain'io zanakalahy io dia fohy dia fohy.
Mazava fa ny fizarana tranainy indrindra eo amin'ny tontolon'ny Linux ary mbola velona ihany koa ankehitriny, Debian, Slackware y Red Hat.
LNy fanambarana teo aloha dia tsy midika hoe izy ireo no fizarana mahazo aina indrindra ho an'ny, na aleon'ny, mpampiasa farany na avy aminao.
Ny haben'ny fianakaviana tsirairay amin'ireo Distro telo voalohany
Ity sary ity dia tsara raha mihodina mba hankasitraka azy amin'ny toerana samihafa. Raha ahodinantsika 90 degre izany na apetratsika ambony aza dia mbola miharihary fa ny Betsaka ny zaza teraka. Fa maninona no, manontany tena ny olona iray? Heveriko fa tsy izy io satria io no be indrindra Sexy y mafana ny telo voalohany. 😉
Ny haben'ny fianakavian-janaka roa an'i Debian dia manan-danja ihany koa: Knoppix y Ubuntu.
Avy eo manaraka ny fianakaviana Red Hat, ary farany ny Slackware.
Amin'ny fomba fijery mampitaha dia afaka manamafy isika fa ny baiko amin'ny Ny haben'ny fianakaviana isaky ny Distro telo voalohany dia: Debian -> Red Hat -> Slackware.
Mizarazara be i Linux. Izay distro no hofidiko?
Tao amin'ny lahatsoratra iray navoakako mitondra ny lohateny «Fahafahana misafidy«Tamin'ny 24 Jona 2013, nanolotra ny hevitro momba ny fomba hisafidianana fizarana iray aho noho ny tena fisian'ny maro loatra distros, ary niresaka ny Trunk Distros na Distros Voalohany ho toy ny fanombohana tsara. Samy eo sy eto no mitazona izany samia misafidy arakaraka ny heviny, azony na antoniny. Tsy afaka manome torolàlana tsy mety diso isika amin'io lafiny io.
Ao amin'ny lahatsoratra iray hafa mitondra ny lohateny «Fa maninona aho no mampiasa Debian eo amin'ny biraoko?«, Navoaka tamin'ny 27 martsa 2013, nanazava ny anton'izany aho momba izany ary tsy dia sarotra loatra ny milaza fa mbola mitazona azy ireo aho. 😉
Azonao lavina ve fa mizarazara ny Linux?. Inona no nanjary tamin'ny naha-Solar System anao miaraka amin'ny Sun Linux sy ireo planeta telo azy Debian, Slackware, Red Hat, ho lasa Universe iray manontolo miaraka amin'ireo Galaxies, Suns ary Astros hafa?.
Ry mpamaky malala na mpampiasa farany, tsy maintsy misafidy tsara izay fizarana no tianao indrindra amin'ireo ranomasina goavambe misy anao. Ny laharan'ny malaza indrindra dia mety ho fanombohana tsara.
Manasa anao ihany koa izahay hanaraka ny lahatsoratra navoaka na havoaka ao amin'ny DesdeLinux, izay azo antoka fa hanampy anao hahazo birao na serivera mendrika avy amin'ny fizarana roa mifantoka mafy amin'ny tontolon'ny orinasa OpenSuSE (SuSE-Slackware) sy CentOS (Red Hat), na manomboka amin'ny Debian.
Aorian'ny fitsidihana dia asao ny mpamaky tsirairay hanatsoaka ny fehiny avy ary hanome hevitra momba azy ireo
Mandra-pahatongan'ny fizarana manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fitsinjarana mandritra ny fotoana fitsinjaram-pahefana Linux
Nianiana aho fa io SuSE io dia avy amin'ny RedHat ... Oh gaga fa zanakavavin'ny Slackware ...
Salama Omar. Manana hatramin'ny 7 hariva aho anio hamaly ny hevitra. Rahampitso dia andro hafa. Ny fisavoritahanao dia mety ho avy amin'ny endrika fonosana ampiasain'ny RHEL, CentOS, SuSE, OpenSuSE sy ny hafa, izay ny RPM.
Ao anatin'io "timeline" io, aiza i Lxle, miorina amin'ny Lubuntu?
karlggest dia hoy izy:
Slackware farafahakeliny zokiny roa volana noho i Debian. Ary tsy misy amin'ireo telo ireo no fizarana voalohany, izay azo jerena ao amin'ilay sary. Raha ny marina, amin'ny wikipedia dia manondro zavatra mahaliana roa izy ireo (1):
1) Ny fitohizan'ny SLS sy Slackware, izay mety hanondro azy roa ho fizarana voalohany voalohany.
2) Fahasosorana amin'ny SLS antony iray hanombohan'i Ian Murdock ny tetikasa Debian.
Raha ny SuSE Linux, dia miorina amin'ny Slackware voalohany, fa avy eo amin'ny Jurix (2). Ny fitoviana amin'ny Red Hat tamin'ny voalohany dia nahena ho an'ny packager, na dia mahazatra azy ireo izao ny mamorona na manosika ny teknolojia miaraka, toy ny btrfs.
Mamaly an'i karlggest
Averiko ihany fa tsy manana hatramin'ny 7 hariva aho anio hamaly ny hevitra. Rahampitso, mampanantena aho fa hamaly hafa aho.
Pedruchini, heveriko fa ny fanafohezan-teny LXDE izay mamaritra ny Desktop, na ny tontolon'ny birao, izay miavaka amin'ny fanjifana ambany ny loharanom-pitaovana. Heveriko fa io no birao maivana indrindra amin'ireo birao malaza indrindra toa ny GNOME, KDE, kanelina, MATE, XFCE, ary LXDE mihitsy. Manoro hevitra anao aho hitsidika https://blog.desdelinux.net/escritorios-debian/
ka manana hevitra momba izany ianao. Midika izany fa tsy an'ny Debian irery ny LXDE. Ny mifanohitra amin'izay no izy. Azonao atao ny mahita ny fomba fampiharana azy amin'ny fizarana Linux maro hafa.
Salama, marina i Pedruchini. Lxle dia fizarana, miaraka amin'ny birao LXDE, azo avy amin'ny Lubuntu 😉
Mamaly an'i joselu68
Marina ny anao. Hitako taminao, Pedruchini sy Joselu68, fa misy izany distro izany. Vao avy nitsidika ny distrowatch.com aho, ary tena LXLE miorina amin'ny Debian, Lubuntu. Misaotra tamin'ny fanazavana !.
Misaotra naneho hevitra sy nanazava, Karlggest. Ao amin'ny lahatsoratra ihany no lazainay fa izy ireo "ny distro voalohany mijanona velona mandraka androany", na inona na inona fivoaran'izy ireo. Tsy azo lavina fa, amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa, dia tafiditra ao anatin'io vondrona io ireo distros telo voalaza. Betsaka amin'izy ireo no teraka ho toy ny Tetikasa ary lasa nizara toy izany koa.
Azafady fa tsy avy amin'ny Ubuntu i Ututo? ary koa ny Tuquito-Linux
En http://distrowatch.com/table.php?distribution=ututo Mampahafantatra anay izy ireo fa ny UTUTO, fizarana iray izay tsy miasa, dia avy any Arzantina, ary miorina amin'ny GENTOO
Ny "Tuquito" dia miorina amin'ny Debian, Ubuntu. Arzantina izy io, misy latabatra kanelina. GNOME, LXDE, araka ny distrowatch.com
Ahoana ny fampiasana kinova vaovao amin'ny tabilao? https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
Tonga hanome izany koa izy. : thumbs up:
Misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao, nohavaozinay ny lahatsoratra tany am-boalohany 🙂
Alahady soa, Mauro. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra. Notsidihako ny pejin'ny Wikipedia izay notanisaininao tamin'ny tranokalan'ny console2 Links2010 ary azo antoka fa vaovao kokoa ny sary. Mamitaka amintsika ny fahazarana. Mijanona ho zon'ny mpamorona "copyright (C) 2012-28 Andreas Lundqvist, Donjan Rodic". Fa ao amin'ny Archive History - File History, Konimex dia manavao azy hatramin'ny 2016 Janoary XNUMX, satria nanapa-kevitra ny tsy hanavao azy io intsony ireo mpanoratra azy tany am-boalohany. Andeha hojerentsika raha afaka manavao azy amin'ny lohateny manondro ny rohy Wikipedia i Luigys, ny FromLinux Administrator. Misaotra indray, Mauro, amin'ny fandinihana marina toy izany.
Nanavao ny sary lehibe izahay, manararaotra misaotra anao aho amin'ny asa lehibe ataonao ho an'ny fiaraha-monina FromLinux, ity lahatsoratra ity dia fahitana tena tsara amin'ny fizarana amin'ny fotoanan'ny Linux Distros isan-karazany. Zava-dehibe ny fahalalana ny tetezamita rehetra izay tsy maintsy nahatongavan'i Linux ankehitriny, amin'ny fomba toy izany koa manome antsika fahitana futuristic ny zavatra rehetra mety tonga amintsika
Luigys: avy amin'ny Links2 no isaorako anao noho ny hevitrao. Jereo raha hamita ny lahatsoratra voalohany momba ny CentOS Hypervisor aho anio. Eduardo Noel dia misintona ireo trano fitahirizana li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/ sy ny hafa, miaraka amin'ireo fonosana haino aman-jery ilaina hanaovana desktop. Amin'ity herinandro ity dia miala sasatra izy. Ho an'ny herinandro ambony dia hatolotro eo an-tanako izy ireo. Fiarahabana sy fahombiazana.
Luis Tz Fernandez dia hoy izy:
Ny fahasamihafana sy ny fanaparitahana Linux no tena olana. Raha tsy voahitsy ny rindrambaiko maimaim-poana, dia tsy ho afaka mandrefy rindrambaiko manana izany mihitsy. Ilaina ny firaisan'ny mpamorona sy ny fifantohana bebe kokoa amin'ny filozofia Richard Stallman, ilaina ny miady amin'ny lozisialy fananana amin'ny lafiny rehetra.
Valiny tamin'i Luis Tz Fernández